Amalungiselelo "I-Nazol Kids" ne "Nazol Baby" - indlela yokuphatha umkhuhlane ovamile, owadalwa ngqo izingane. Ngenxa ye-phenylephrin, lezi zilungiselelo zibekezelela kahle izingane kusukela ezinsukwini zokuqala zokuphila kwazo, ngoba ngesikhathi sokudalwa kwazo zonke izici ezakhiwe ezitsheni ezisendlini yezinsana zezingane zazicatshangelwa. Lokhu ahluke kwezinye izimali ezivela kubanda abavamile kubantwana.
Isidakamizwa esithi "Nazol Baby" singasetshenziswa ukuphatha i-rhinitis ezinganeni kusukela ezinsukwini zokuqala zokuphila kwazo. Ngenxa yokuthi ikhiqizwa ku-vial ekhethekile, ngeke kudingeke usebenzise amadivaysi e-dosing ahlukile kanye namapipipi. Lokhu kuyinto elula kakhulu, ngoba ingalimaza i-mucosa yengane yomntwana.
Kodwa imithi "Nazol Kids" yasungulwa izingane kusukela eminyakeni engu-6 futhi isivele ishicilelwe ngesimo se-spray. Iqukethe i-eucalyptus, enomthelela omuhle we-bactericidal kanye ne-anti-inflammatory.
Imithi "I-Nazol Baby" iyisidakamizwa sokusetshenziswa kwama-topical, ngaphezu kwalokho, inomsebenzi owenziwe kahle we-adrenomimetic. Lesi sidakamizwa sinomphumela we-vasoconstrictive, ukuze ukuphefumula komzimba ngesikhathi somkhuhlane kuba lula kakhulu, futhi ingane yakho ingajabulela ukulala ebusuku. Futhi, lesi sidakamizwa sisiza ukuqeda ukuvuvukala kwe-mucosa yama-nasal, ithubhu ye-eustachian kanye nezono ze-paranasal.
Ngaphezu kwe-phenylephrine, isidakamizwa esithi "i-Nazol Baby" ihlanganisa i-glycerin, eyenza i-mucosa ye-nasal, ibe ingathinti umsebenzi wayo. Umphumela walesi sidakamizwa kungenxa yekhono le-phenylephrine hydrochloride ukwenza umphumela oshukumisayo kuma-receptor e-alpha1-adrenergic asezindaweni ezibushelelezi zomswakama we-mucosa womzimba, ngaleyo ndlela unciphise izitsha futhi avimbele ukuvuvukala kwesigxobo somntwana esiswini.
Ngokusetshenziswa kwendawo, i-phenylephrine hydrochloride ayifakwe engxenyeni yegazi. Umphumela wokwelapha walesi sidakamizwa ufika emaminithini amathathu emva kokusebenzisa kwawo futhi uhlala amahora angu-6. Ukunyamalala ngokuphelele kwe-rhinitis kwenzeka cishe izinsuku ezintathu emva kokuqala kokusetshenziswa kwesidakamizwa.
Inkomba nendlela yokusebenzisa izidakamizwa
Isidakamizwa i-Nazol Spray sisetshenziselwa kokubili yedwa kanye nokwelashwa okuyinkimbinkimbi kwezingane ezikhononda nge-rhinitis yezici ezihlukahlukene, ngisho nezifo. Isixazululo somkhuhlane ovamile sisetshenziselwa ukwelapha i-rhinitis ejulile, izifo ezihambisana nezifo ezifana nomkhuhlane, amakhaza, sinusitis, ngaphambili.
Isidakamizwa "i-Nazol Baby" sivame ukushiwo ukwelashwa kweziguli ezikhalaza i-otitis media.
Le sejenti isetshenziswe nge-intranasally. Ngaphambi kokusebenzisa lesi sidakamizwa, kuyadingeka ukuhlanza izoni zempumu. Isikhathi sokwelashwa sinqunywa kuye ngesifo futhi siyisiguli ngasinye.
Ukuze ukwelashwa i-rhinitis enzima ezinganeni ezineminyaka engu-6, kutuswa ukusebenzisa imithi ye-Nazol Kids. Futhi ibhodlela kufanele lisetshenziswe kuphela ukwelashwa kwesiguli esisodwa, ngoba amagciwane amaningana angasakazwa ngenkathi ukwelashwa.
Imithelela emibi engenakwenzeka kanye nokuphikisana
Izingane le mithi ivame ukubekezelela kahle, kuphela kwezinye izimo kungase kube khona ukuvutha, ukucubungula kwe-mucosa yama-nasal, i-arrhythmia, i- hyphenia ebusweni, isizungu, isifo somfutho wegazi ophezulu, umqondo wokumesaba okungenakuqondakala. Kumele kuqashelwe ukuthi lezi zenzakalo zenzeke kuphela ngokusetshenziswa kwesikhathi eside kwezidakamizwa, kanye nesilinganiso esandayo.
Isidakamizwa asikhuthazwa abantu abaphethwe yisifo sofuba, isifo sikashukela, i-hyperthyroidism, ukucindezelwa komzimba kanye nokuzwela komuntu ngamunye ezinxenyeni ezihlukahlukene zomuthi.
Isidakamizwa "Isikhumba-isikhumba" ngumyalo wonke umuntu owaziyo
Kuhle Mystic. Uhlu okungcono imfihlakalo amafilimu